Amanqaku ka-Ash Munshi Martech Zone
Amanqaku ngu UAsh Munshi
Ngaphambi kokujoyina uPepperdata, u-Ash wayengusihlalo olawulayo weeMariana Labs, ukuqala kokufunda okunzulu okwathengiswa ngoDisemba 2015. Ngaphambi koko, wayengu-CEO weeNkqubo zeGrafite, into yokuqala yokugcina idatha eyathengiselwa i-EMC DSSD ngo-Agasti ka-2015. njenge-CTO ye-Yahoo, njenge-CEO yeenkampani zikarhulumente nezabucala, kwaye ikwibhodi yezinto zokuqala kwetekhnoloji. U-Ash waya kwiYunivesithi yaseHarvard, iYunivesithi yaseBrown, kunye neYunivesithi yaseStanford.
Ukuphakamisa ixabiso leDatha eNkulu ngePepperdata's Big Data Stack Optimization kunye nokuSebenza okuZenzekelayo
NgoLwesine, Septemba 17, 2020 NgoLwesine, Septemba 17, 2020 UAsh Munshi
Xa ihlawulwe ngokuchanekileyo, idatha enkulu inokusebenza ngamandla. Idatha enkulu ngoku idlala indima ebalulekileyo kuyo yonke into ukusuka ebhankini ukuya kwezempilo kurhulumente. Uqikelelo olothusayo lokukhula kweemarike ezinkulu zedatha, ukusuka kwi- $ 138.9 yezigidigidi ngo-2020 ukuya kwi-229.4 yezigidigidi ngo-2025, luphawu olucacileyo lokuba idatha enkulu ngoku yindawo esisigxina kwishishini. Nangona kunjalo, ukuvelisa elona xabiso liphezulu kwidatha yakho enkulu, iimfuno zakho zesitaki esikhulu sedatha